Ny Ubuntu Phone Developer dia manazava ny tsy fahombiazan'ny rafitra miasa | Ubunlog
Enim-bolana mahery izay taorian'ny nanambaran'i Canonical voalohany ny tsy handefasana fitaovana Ubuntu Phone intsony ary volana maromaro taorian'ny nanambaran'i Mark Shuttleworth ny faran'ny fanampiana avy amin'ny Ubuntu sy Canonical. Ary na eo aza izany rehetra izany, mbola misy ny fitsikerana mafy ny zava-misy.
Amin'ity tranga ity dia nivoaka ny mpamorona Simon Raffeiner, mpamorona rindrambaiko ho an'ny Ubuntu Phone, tompona terminal maro ary mpandray anjara amin'ny hackathons mifandraika amin'ny Ubuntu Phone. Simon Raffeiner dia nanoratra tao amin'ny bilaoginy lahatsoratra henjana amin'ny fitantanan'i Canonical ny Ubuntu Phone. Manamafy sy manondro lesoka maro izay natao nandritra ny fivoarany ary manamarina ny fandaozany azy. Anisan'ireo antony ireo ny fikarohana ao anaty akany tsy mahasoa. Android sy iOS no mpifanandrina tamin'ny Ubuntu Phone fa ireo tia azy kosa dia nitady mpifaninana kokoa hiatrika ny ampihimamba an'i Google sy Apple fa tsy rafitra miasa. Amin'ny tranga maro, ny mpampiasa dia tsy nihevitra azy io ho mahomby.
Ny Ubuntu Phone dia tsy nisokatra toa ny fiheveran'ny mpampiasa rehetra
Ny tanjona napetrak'i Canonical dia be faniriana mihoa-pampana, be fatra-paniry laza koa, noho izany ny fianjerany ihany koa. Canonical dia nitady hahazoana 1% amin'ny tsenan'ny finday, isan-jato tena avo lenta ho an'ny rafitra iray toy ny Ubuntu Phone, vao mainka aza raha raisinay fa tsy dia be loatra ny olona mampiasa Ubuntu ho rafitra fiasa. Ny tsy fahampiana sy fampahalalana diso momba ny telefaona finday dia teboka ratsy iray hafa.
Saingy angamba ny fananganana rafi-piasana misokatra kely toa ny Ubuntu Phone no ratsy indrindra tamin'izany rehetra izany. Araka ny voalazan'i Simon Raffeiner, ny Ubuntu Phone dia tsy nanokatra rafitra fandidiana toa ny nambaran'ny Canonical. Amin'ny tranga maro tsy nisafidy ny mpampiasa ary voafetra fotsiny amin'ny tranokala Github izay nanaovana ny pullrequets fa tsy misy zavatra hafa. Ary ny marina dia mpampiasa maro no ireo izay mitatitra an'ity toe-javatra ity.
Na izany na tsy izany, i Simon Raffeiner dia maneho ny ampahany amin'ny tantara izay tsy dia tsikaritra loatra, ny tontolon'ny mpamorona. Canonical dia mbola tsy namaly ary tsy hamaly, saingy toa midika izany fa mpandrindra vaovao miditra amin'ny UBPorts Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone Developer dia manazava ny tsy fahombiazan'ny rafitra miasa
Juanjo Riveros sary placeholder dia hoy izy:
Te hanana izany fotsiny aho. Izaho aza nanimba ny moto x 2 rehefa nanandrana nametraka seranan-tsambo beta nataona mpandraharaha sasany 🙁
Valiny tamin'i Juanjo Riveros
Emmanuel Martinez dia hoy izy:
Tsy nahomby ny fizarana, izany no nitranga
Valiny tamin'i Emmanuel Martínez
Louis dextre dia hoy izy:
mmm fa alefaso ho an'ny fiarahamonina
Valiny tamin'i Luis Dextre
Antonio Ferrer Ruiz dia hoy izy:
Ananako izany, saingy heveriko fa ny olana lehibe indrindra dia ny ankamaroan'ny rindranasa dia webapps ary ny tsy fananana whatsapp dia tsy manintona ireo mpampiasa tsy Linux ihany koa. Na izany na tsy izany dia tonga ny fotoana hihinanana ny terminal
Valiny tamin'i Antonio Ferrer Ruiz
Ivan Legrán Bizarro dia hoy izy:
Tsy mila mihinana ny terminal ianao, farafaharatsiny raha BQ izany; amin'ny tranonkala dia manazava ny fomba famelana azy izy ireo ary hametraka Android eo amboniny. Tsy latsaky ny antsasak'adiny no anananao amin'ny Android.
Valiny tamin'i Iván Legrán Bizarro
Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny valinteninao, Iván. Raha BQ izy dia novidiako tamin'ny andro voalohany nivarotana satria tena faly aho fa hanana telefaona miaraka amin'ny Linux. Ny tiako holazaina dia ny manome herim-po fa navelan'izy ireo nihantona ilay tetikasa sy ireo olona rehetra nividy faran'ny terminal tamim-pahazotoana. Raha fintinina dia izany no izy. Averina indray, misaotra betsaka tamin'ny valinteninao.
Ivan Legrán dia hoy izy:
Tsy maninona izany. Nividy ny tabeta BQ tamin'ny Ubuntu aho. Nihevitra aho fa ho "Ubuntu fa amin'ny Tablet". Heveriko fa ny doka momba ny vokatra dia tsy nahavita nanazava tsara fa saika tsy misy rindrambaiko; izay nanamboatra seranan-tsambon'i Firefox sy Libreoffice fa ny sisa amin'ireo rindranasa dia bontolo fotsiny. Tsy afaka nahita horonan-tsary marobe akory aza ianao tamin'ny avi / mp4 ... Ny takelaka iray izay tsy ahafahanao mihinana multimedia dia sarotra be na amin'inona na amin'inona.
Mety ho nahaliana ilay tetikasa raha toa ka nitondra ny herin'ny Ubuntu tamin'ny telefaona sy Takelaka… Nefa tsy nanao izany izy ireo. Soa ihany, ary ataon'ny BQ hatrany izany, avelany hamaky sy hametraka Android ianao, araka ny fanazavako.
Nanana Windows Phone aho ary ankehitriny avelan'izy ireo tsy misy fanohanana, tsy omen'i Microsoft fitaovana hametrahana Android aho ... Tena maharary izany.
Valiny tamin'i Iván Legrán
Ny fifandraisana teo anelanelan'ny Canonical sy Microsoft dia nidika ny fandaozana ny fifandraisana sy ny Ubuntu Phone. Aza mitady fanazavana intsony. Toy izany ny asa aman-draharaha ary amin'ny ankabeazan'ny tranga dia an-tapitrisany no apetraka amin'ny fitsipika sy etika.
Josinux dia hoy izy:
Tsy misy azo hazavaina, ary tsy nisy tsy nahomby, ny Android tsotra izao dia efa miparitaka be loatra ka tsy manova azy intsony ianao, toy ny WhatsApp izany, tsy tianay izany fa aleo hojerentsika hoe iza no manolo ny WhatsApp. Sarimihetsika Indiana avokoa ny fanazavana hafa rehetra.
Valio amin'i Josinux
Compux72 dia hoy izy:
Eny, tiako tokoa ny Android. Mety tsy 100% OpenSource io, saingy tsy maintsy ekena fa matotra sy miorina amin'ny Linux. Na dia tsy ilay fahalalahana tadiavintsika rehetra aza dia amidin'ireo orinasa ny telefaona ary tsy azonao atao ny manova ny tenanao sy manao azy araka ny fanao. Fantatro fa nisy telefaona iray hanangonana anao,
fa tsy tonga tamin'ny vokany.
Valiny amin'ny Compux72
Ubuntu 17.10 dia hampivondrona sy hanadio ny sehatry ny tambajotra amin'ny farany
Netplan dia hiasa ao amin'ny Ubuntu 17.10